रामचन्द्र पौडेलले गरे कांग्रेस छाड्ने घोषणा, एकाएक के आइलाग्यो त्यस्तो ? – Points Nepal
रामचन्द्र पौडेलले गरे कांग्रेस छाड्ने घोषणा, एकाएक के आइलाग्यो त्यस्तो ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २३, २०७८ समय: ७:००:०८
२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चेतावनीशैलीमा कांग्रेस छाड्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सभापतिमा साझा उम्मेदवार बनाउन नसक्ने हो भने आफूलाई पार्टीबाटै विदा गर्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका हुुन् ।
तर पूर्वमहामन्त्री सिंह र केन्द्रीय सदस्य डा। शेखर कोइरालाले सभापतिमा दाबी छाडेनन् । नेता डा। रामशरण महत भन्छन्, ‘रामचन्द्रजीले मलाई सहयोग गर्नुस् भन्दा प्रकाशमानजीले म पनि लड्छु भनेको छ । शेखरजीले लड्ने भनेको छ ।’
उनले अघि भने, ‘सबै लड्ने भए म राजनीतिबाट विदा हुन्छु, घरमै आराम गर्छु । पार्टीबाटै अलग हुन्छु भन्नुभयो रामचन्द्रजीले ।’ एक नेताका अनुसार आकांक्षीहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले झोँक्किएर यसो भनेका हुन् ।
Last Updated on: December 9th, 2021 at 7:00 am